Maitiro ekuwana blog mazano uchishandisa Google
Muvhuro, Kukadzi 14, 2011 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Michael Reynolds
Sezvaungave iwe uchiziva, blogging yakanaka content marketing chiitiko uye zvinogona kutungamira mukuvandudzwa kweinjini yekutsvaga, kutendeka kwakasimba, uye zvirinani pasocial media kuvepo.
Nekudaro, chimwe chezvinhu chakaomesesa mablogging chiri kutora mazano. Pfungwa dzeBlog dzinogona kuuya kubva kunzvimbo zhinji, kusanganisira kudyidzana kwevatengi, zviitiko zvazvino, uye nhau dzemabhizimusi. Nekudaro, imwe nzira huru yekutora blog mazano ndeye kungoshandisa Google nyowani mhedzisiro mhedzisiro chinhu.
Nzira yekushandisa izvi ndeyekutanga kutaipa mumazwi akakosha ane chekuita neindasitiri yako, wozoona izvo zvinokuzadza neGoogle. Semuenzaniso, lets say unomhanya a chikafu blog uye iwe urikutsvaga mazano. Iyi ndiyo mimwe mienzaniso yekutsvaga iwe kwaunogona kuita:
Nekungyorera "kudya kunze" pabhokisi rekutsvaga, iwe unoratidzwa nevamwe refu muswe kiyi sarudzo dzinogona kushanduka kuita blog blog misoro. Heano mumwe muenzaniso:
Nekungotanga kutsvaga kwako ne "chikafu", iwe unowana dzimwe pakarepo pfungwa dzinogona kushanduka kuita makuru mazita. Semuyenzaniso:
"Mapepanhau ekudya: izvo zvavasingakuudze paTV"
"Mirayiridzo yepiramidhi yekudya: kubvunzurudzwa nenyanzvi nhatu dzemuno dzekudya"
Nekutanga yako blog zita neaya mazwi ekutsvaga, iwe uri kuenderana yako blog musoro wenyaya nemitsara iri kunyatso kutsvakwa nevanhu, izvo zvinowedzera mikana yako yekuwanikwa kuburikidza neGoogle kutsvaga.
Kana iwe ukabatika uye usingakwanise kuuya nemusoro wenyaya yako inotevera blog, tungamira kuGoogle uye ukande mamwe mazwi pairi ane chekuita neako indasitiri. Iwe unogona kuwana mamwe mazano makuru anogona zvakare kugadzirisa SEO yako.
Tags: Analyticsmhedzisiro yebhizinesikunyatsoshandamultidomainpage speedTsvaga KutengesaSliderWordPress
Yemagariro Midhiya Mashandisiro Ekuwedzera 18% + mumakore mashanu
Kukadzi 20, 2011 na8:04 PM
Ini ndiri mutsva pachiitiko chekubloga (http://jasonjhr.wordpress.com/) uye ndave nedambudziko rekuuya neblog post mazano. Iri izano rakakura rekubatsira kutarisa mamwe mazano, uye pamwe kutsvaga mamwe matsva.
Iwe unofunga kuita izvi kungabatsira neSEO uye keyword sarudzo zvakare?
Ndinofunga kudaro, sezvo uri kuenzanisa misoro yeblogi yako nekutsvaga kwakakurumbira muGoogle. SEO inosanganisira zvakawanda zvezvikamu zvinofamba, kunyange 🙂
Kuverenga kukuru. Izvo zvakakosha kuti makambani arambe achipomba zvinyowani kunze uye kuuya nemazano matsva emukati nguva nenguva zvinogona kunetsa. Izvo zvakakosha kuti ugare pasi uye kuronga kumberi, kutora nguva kunze uye kutarisa pane yako yemukati marongero. Kubva paGoogle chinzvimbo chekubatanidza chivakwa, zvakakodzera nguva uye simba!
Jul 10, 2016 pa 8: 39 AM
Mazano akajeka, ndinosarudza kutora mazano kubva pane zvakaitika zuva nezuva kuti ndiratidze iyo iri padyo fomu yekuverenga kwemuverengi.